आलसका यी चमत्कारिक फाइदाहरु; थाहा पाउँदा चकित पार्नेछ, यसरी उपयोग गर्नुहोस् – The Sun Nepal
आलसका यी चमत्कारिक फाइदाहरु; थाहा पाउँदा चकित पार्नेछ, यसरी उपयोग गर्नुहोस्
September 13, 2019 [email protected]	0 Comments
स्वास्थ्यको लागि आलस एक गुण नै गुणको खानी हो । हामीमध्ये धेरैलाई आलसको अद्भुत फाइदाहरुको बारेमा थाहा नहुन सक्छ । शाकाहारी व्यक्तिहरुका लागि आलसलाई ओमेगा ३ फ्याटी एसिडको राम्रो स्रोत मानिन्छ । यसमा लगभग ५० प्रतिशत ओमेगा ३ फ्याटी एसिड अल्फ लिनोलेनिक एसिडको रुपमा हुन्छ । हाम्रो शरीरभित्र यो नबन्ने हुनाले यसलाई हामीले भोजनको माध्यमबाट नै लिनुपर्ने हुन्छ । यदि नियमित रुपमा आलस सेवन गर्नुभयो भने यसको सकारात्मक नतिजा देखिन्छ ।
आलसमा ओमेगा ३ का साथ फाइबर, प्रोटिन, भिटामिन बी कम्प्लेक्स, म्यगनिज, म्यागनेसियम, पोटासियम, फास्फोरस र सेलेनियम लगायतका तत्व पाइन्छ । शरीरलाई रोगबाट दुर राख्न खानामा नियमित दुई चम्चा आलस समावेश गर्नुहोस् । आज हामी आलसका चमत्कारिक फाइदाहरुका बारेमा विस्तृत जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
१. पाचनमा सुधार : यदि तपाइँ प्रायजसो कब्जियतको समस्याबाट ग्रसित हुनु हुन्छ भने दैनिक खाना खानु भन्दा पहिले १ चम्चा आलस खानु होस्। यसले तपाइँको पाचन सुधार्नमा निकै मद्धत गर्दछ । तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि प्रशस्त मात्रामा पानी पिउन नभुल्नुहोस्।
२. वजन नियन्त्रण गर्नु : आलसको सेवन गर्नाले शरीरमा चर्पी जम्मा हुन दिँदैन र शरीरलाई चुस्त बनाउँछ। यदि तपाइँसँग बिहान उठेर व्यायाम गर्ने समय छैन भने, आलसीको सेवन गर्नु उत्तम हुन्छ । यसको सेवनले वजन नियन्त्रण गर्न निकै सहयोग पुर्याउँछ । खाना खानुभन्दा एक घण्टा पहिले १ चम्चा आलस चपाई-चपाई खानुहोस्। त्यसपछि १ गिलास पानी पिउनुहोस्। यसको आधा घण्टा पछि फेरी १ गिलास पानी पिउनुहोस्। यसले पेट भरेको महसुस हुन्छ र तपाइँले कम मात्रामा मात्र खाना खानुहुनेछ । जसले गर्दा लगातार वजन नियन्त्रण गर्न र घटाउन मद्धत गर्दछ।
३. दम रोगमा फाइदा : दम रोगीका लागि आलस निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसको लागि आलसको बीउलाई पिसेर पानीमा मिसाउनुहोस् र १० घण्टाका लागि छोडीदिनुहोस्। अब यस पानीलाई नियमित रुपमा दिनको ३ पटक पिउनाले दम कम हुँदै जान्छ। साथै यो पानीले खोकीमा पनि राहत मिल्छ।
४. छाला र कपाललाई स्वस्थ्य र सुन्दर बनाउनु : स्वस्थ, सुन्दर, चमकदार र सर्लक्क कपाल पाउनको लागि दैनिक १ या २ चम्चा आलस सेवन गर्नुहोस्। यसमा पाइने एन्टीअक्सिडेन्ट गुण छालामा कोलेजन प्रोडक्सन र नयाँ सेल्स बनाउन बढावा दिन्छ। जसले गर्दा उमेरका साथसाथ छालामा आउने परिवर्तन कम देखाउँछ।
५. हाई कोलेस्टेरोल लेभल कम गर्नु: नियमित आलसको सेवन गर्नाले हाई कोलेस्टेरोल लेभललाई कम गर्न मद्धत गर्दछ । यसका साथै ब्लड प्रेसरको समस्या भएकाहरुका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
६. मधुमेह रोगीका लागि लाभदायी: आलसको बीउमा सेल्युलोसकै एक रुप, लिग्रिन भरपुर मात्रामा पाइन्छ, जसले ब्लड सुगरलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यदि तपाइँ मधुमेहबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने आलसको २५ ग्राम मात्र भएपनि आफ्नो भोजनमा सामेल गराउनुहोस् ।
७. क्यान्सरको रोकथाममा उपयोगी: शरीरमा हुने विषाक्त र फोहोरबाट क्यान्सरको खतरा हुने सम्भावना हुन्छ । यसमा हुने लिग्रिनले शरीरमा हुने विषाक्त, गन्धपदार्थ र कोलेस्टेरोललाई एकसाथ बाहिर निकालिदिन्छ र क्यान्सरबाट बचाउन मद्धत गर्दछ । यसको सेवनबाट प्रोस्टेट क्यान्सर, कोलोन क्यान्सर र स्तन क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ ।
८. जोर्नी दुखाईमा राहत: आलसले हरेक किसिमका जोर्नी दुखाईको समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ । यसको सेवन गर्नाले रगत पातलो हुन्छ, जसले गर्दा गोडामा रक्तप्रवाह सहि तरिकाले हुन्छ र जोर्नी दुख्ने समस्या दुर हुन्छ । यसको लागि आलसको पाउडरलाई सरसोँको तेलका साथ (अर्थात् मिसाएर) तताउने र यसलाई चिसो हुन दिने । चिसो भएपछी दुखेको जोर्नीको भागमा लगाउने । यसले आराम मिल्छ । यसरी प्रयोग गर्नाले ३-४ दिनमै जोर्नी दुखाईको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
← नाम एक, उपचार अनेक,पिपल पातको फाइदा, धेरै रोगहरुको उपचार यसरी हुँदो रहेछ
४९ वर्षीया शिक्षिका ११ वर्षदेखि घाँटीसम्म आउने नदी तरेर विद्यालय पुग्छिन् →
खाना खाएपछी सोँफ खाँदा हुने यी अद्भूत फाइदाहरु, जानीराखौँ र शेयर पनि गरौँ
October 11, 2018 [email protected] 0
काँचो लसुन स्वास्थ्यको लागि एक वरदान नै सावित, हेर्नुहोस् यसका अद्भुत गुणहरु
August 9, 2018 [email protected] 0
जे खाए पनि एकदम दुब्लो, पातलो र कमजोर हुनु हुन्छ ? यी चीज खानुहोस्, ४ दिनमै तौल बढेर फुर्तिलो र बलियो हुनेछ
November 14, 2018 [email protected] 0